Nhau - Waizviziva here kuti maairbags ekutanga ngarava anowanzo sanganiswa nePneumatic Fenders?
Waizviziva here kuti maairbags ekutanga ngarava anowanzo sanganiswa nePneumatic Fenders? Maairbags anoshandiswa pakuvhura ngarava mashandiro uye nekudaro anoshanda chinangwa chakasiyana zvachose nePneumatic Fenders. Pneumatic Fenders inodzivirira zvivakwa zvemabherth nemidziyo, kunyanya panguva yekufambisa-kusvika-kutumira. Iko kunaka uye kuita kweumwe neumwe wavo kwakanyanya kukosha. Maairbags anobatsira kuvhura zvakachengeteka ngarava uye vanoshanda zvizere izvo zvinoratidzwa mune yakaderera mhando zvinodiwa uye yakapusa nzira yekugadzira. Iyo yekugadzira nzira yemaairbags haigone kufananidzwa neiyo yePneumatic Fenders.
Inflatable bhora sumo:
Inflatable rubber fender (inonziwo bhora) imhando yekumira buffer uye inodzivirira ngarava yekushandisa, iyo inoshandiswa zvakanyanya muzvikepe, zvivakwa zvekumahombekombe, mapuratifomu ekumahombekombe, madoko, dhoko, yachts nedzimwe nzvimbo. Inflatable yerabha bhora inonyanya kushanda kupfuura yakajairika rubber fender, uye ine mari, saka inozivikanwa kwazvo.
Iyo inflatable fender igaba remhepo risingavharwe rakagadzirwa nekurembera gluing jira seye skeleton zvinhu. Iyo fender uye bhora rinogona kuyangarara pamusoro pemvura mushure mekuzadzwa nemhepo yakamanikidzwa. Izvo zvakakosha kune ngarava-ku-kutumira berthing uye chikepe-to-wharf Buffer svikiro. Panguva imwecheteyo, iyo pneumatic fender inogona kutora simba remafambiro echikepe, kudzikamisa kudzoka kwechikepe, uye nekuvandudza zvakanyanya kuchengetedzeka kwechiteshi chengarava.
Iyo inflatable fender (nebhora) inoshandisa mweya senge yepakati uye inoshandisa yakamanikidzwa mweya kutora simba remagetsi, ichiita kuti ngarava ichinjike painomira, kuti igone kuzadzikisa kwekurovera uye kudhumhana kunzvenga. Inflatable fenders (nebhora) zvave zvichishandiswa zvakanyanya mumatangi, ngarava dzemidziyo, ngarava dzeinjiniya, ngarava dzehove dzegungwa, mapuratifomu ekumahombekombe, madoko makuru, zviteshi zvemauto, hombe zambuko bhiriji uye mamwe marudzi engarava uye nzvimbo dzekunze.
Rubber Fender, Ship Mhepo Bhegi, Mhepo dzeMahombekombe, Tec Zvikepe, Wakaumbwa Block, China Rubber Fender,